25 พ.ค. 2563 - 14:20 น.
လူနာကို ကုသမှုပေးရင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ခံရတဲ့ ပြည်မြို့က မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေက်တာ မြင့်မြင့်စိန်ဟာ မေလ ၂၅ ရက် မနက်ပိုင်းက ဝေဘာဂီဆေးရုံကနေ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
"ပုဂ္ဂလိက ကြောက်စိတ်အပြင် ဖိစီးမှုတွေတော့ ကျွန်မတို့မှာ ရှိတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးကြောက်စိတ်ရှိတယ်။ အဲဒီချိန်မှာလည်း ကျွန်မတို့ ရင်မဆိုင်ချင်တဲ့ မအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ကျွန်မတို့တွေ့တယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာမှ ကျွန်မက ကူးစက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်တော့ ကျွန်မ တစ်ခါမှ ကူးစက်ခံရမှုအတွက် နောင်တမရှိဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရလို့လည်း နောင်တမရှိဘူး။ ဒါ ကျွန်မတို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက လုပ်ရမှာ။ ဒါပေမဲ့ Safety Working Environment(လုံခြုံမှုရှိတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်) ကိုတော့ အရမ်းကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါသည် အပေါ်မှာရှိတဲ့ Policy Maker တွေရော ပြည်သူလူထုရော ကျွန်မတို့ ဘယ်လောက်ထိအကျပ်အတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာ နားလည်ပြီးတော့ အပေါ်ကလည်း ကူညီစေချင်တယ်။ အချင်းချင်းလည်း ရိုင်းပင်းစေချင်တယ်။ အပြင်ကလည်းနားလည်စေချင်တယ်။ အဲဒီသုံးဦးသုံးဖလှယ်ပေါင်းမှ Safety Working Environment ရမယ်" လို့ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်က ပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်ဟာ ပြည်မြို့ ခုတင် ၅၀၀ ဆေးရုံကြီးက မေ့ဆေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာကို သိရတဲ့နောက် ရန်ကုန်မြို့၊ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝေဘာဂီမှာ ကုသမှုခံယူနေစဉ်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အွန်လိုင်းဆွေးနွေးခန်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဆေးလောကနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကြား ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲ၊ ကိုဗစ်၁၉ ကုသရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကို အကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"အဓိကက ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘာမှမစဉ်းစားမိဘူး။ ဒီဟာကို ငါတို့ အသက်ရှူပိုက်ထည့်မယ်ပေါ့။ လူနာကတော့ မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်တို့အမြင်အရတော့ မကောင်းဘူး။ သို့သော် သူ့မှာ နောက်ဆုံး chance (အခွင့်အရေး) က ဒါပဲပေါ့နော်။ ဒီဟာဝင်သွားရင်လည်း အသက်ရှူစက်ပေါ်တင်ရင်လည်း သိပ်တော့ ကောင်းနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်တာဝန်က အဲဒီအချိန်မှာလုပ်လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းလည်း လုပ်လို့မရဘူး။ Teamwork(အဖွဲ့လိုက်)ပေါ့။ ကျွန်တော့်ပြည်က ဆရာမတွေကိုပြောချင်တာက သူတို့အရမ်းတော်တယ်။ အရမ်းကြိုးစားကြတယ်။ By force(ဖိအားပေးပြီး)နဲ့ ခိုင်းရတာ တစ်ခုမှမရှိဘူး"လို့ ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိန်က ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုဗစ်၁၉-လူနာကိုကုသရင်း ရောဂါကူးစက်မှုအတွက်နောင်တမရှိလို့ မေ့ဆေးဆရာဝန်ကြီးပြော